I-China Banikezela iiCastling, Ukuqinisa, Ukunyathela iiFektri zabavelisi kunye nabavelisi | Iimpawu kunye nobunjineli
Singumvelisi oqeqeshiweyo kunye nomthengisi weenxalenye ze-scaffolding kunye nenkampani yokuthumela ngaphandle kunye nokwenza, ukubetha, ukubetha, ukubanda nokubanda kwonyango lwangaphandle-njengokutshisa i-galvanization eshushu, i-zinc kunye nesingxobo se-powder njl.
Sivelise kwaye sithumela i-Scaffolding casting, i-forging kunye ne-stamping iimveliso zeemveliso kwi-Yurophu naseMntla Melika iminyaka engama-20. Sinobunjineli abanamava nabanokunikezela ngokwezifiso iimveliso njengemizobo nganye kunye neesampuli
I-Ductile Iron eyahlulayo: i-60-45-12,60-40-18, i-iron casting: i-ASTM A27 Gr 70-40
Ukuqhuba: Q235, Q345
Isiphelo seLedger, iNut okanye iNut + isibambo, iRosette okanye iRosette Bolt Coupler, Ukudibanisa (Indoda kunye neBhinqa), i-Wedge (iPin), uzipho, iTyhubhu yokuTshixa, isiphatho, iCollar Nut, iNdebe ephezulu, iBase Jack - Adjustable / okanye iSwivel Base Jack） , UCaster, njl. ..,
* Adjustable / okanye ezijikelezayo Jack Jack: Isiseko ban itheko isiseko ulwakhiwo banikwe. Ukuphakama kwayo kunokuhlengahlengiswa ukuze kulungelelaniswe nomhlaba ongalinganiyo weziza zokwakha. Isiseko sejack ejikelezayo sinokuthambekiswa ukuze siziqhelanise nomhlaba othambekileyo kunye nezinye iimeko zomhlaba, ukugcina inqanaba lonke le-scaffolding. Isiseko sejack sisitshisi esishushu okanye i-electro-galvanized.
Ukuphosa izixhobo, ukwenza izinto kunye nokunyathela iimveliso zezinto ezisetyenzisiweyo njengezinto zeNkqubo yokuQinisa iRocklock, iNkqubo yokuQhobosha ityhefu, Inkqubo yeSakhelo seTrafu, iTyhubhu yeTrafu kunye neNkqubo yoCingo kwinkalo ye-Industrial scaffolding, building, facade scaffolding, support structures, and Sidewalk Bridge System, Formwork Isixokelelwano, iModyuli yeScaffold System, njl.
Inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM enikezelwa kwisicelo somthengi.
Sifumene igama elihle ngomsebenzi wethu wobunjineli / olungileyo kwaye uqulethe ulawulo lomgangatho / kwaye ngexesha lokuhanjiswa .Iinjongo zethu kukwakha ubudlelwane beshishini lokuphumelela kunye nabathengi ngokubonelela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngokomzobo wabathengi kunye neemfuno ngexabiso elifanelekileyo.
Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi ngayo nayiphi na imibuzo!
Egqithileyo Ubungakanani obukhulu beCastings